यसरी भयो एउटा गुण्डा नाइकेको अवसान - The First Nepali Digital Newspaper from Australia (Ausnepal news)
यसरी भयो एउटा गुण्डा नाइकेको अवसान
प्रकाशित मिति: २२ श्रावण २०७१, बिहीबार August 7, 2014
साउन २२, काठमाडौं: प्रहरीसँगको दोहोरो भिडन्तमा गुण्डाका नाइके दिनेश अधिकारी उर्फ ‘चरी’ मारिएका छन्। लामो समयदेखि प्रहरी खोजीको सूचीमा रहेका चरी राजधानीको सीतापाइलाबाट पश्चिमतर्फ साढे छ किलोमिटर टाढा भीमढुंगा भञ्याङमा प्रहरीको गोलीबाट मारिएका हुन्।
एमाले निकट चरी एमाले धादिङ क्षेत्र नम्बर १ का पूर्व उपाध्यक्ष समेत थिए। लामो समय भारतमा लुकेर बसेका चरी केही दिन अगाडी काठमाडौं आएका थिए। स्रोतका अनुसार काठमाडौं प्रवेश गरेपछि पनि चरीले केही व्यापारीलाई फोनमा धम्क्याउँदै आएका थिए।
धादिङकै राधे भन्ने राधाकृष्ण भण्डारीलाई खुकरी प्रहार गरेको घटनामा फरार रहेका चरीलाई प्रहरीले खोजी गरिरहेको थियो। राजधानी छिर्ने नाका थानकोट र फर्पिङमा प्रहरीले क्लोज सर्किट सीसीटीभी राखेपछि चरी काठमाडौंमा लुकेर बसेका थिए। चरी काठमाडौं छिरेको सुचना पाएपछि महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखाले बुधबार सीतापाइला, कलंकी, धापासी र महाराजगंज क्षेत्रमा प्रहरी टोली परिचालित गरेको थियो।
चरी हतियार सहित हिडिंरहेको सुचना पाएपछि महाशाखाकी डिएसपी मिरा चौधरीको कमाण्ड सीतापाईला क्षेत्रमा खटिएकी थिईन्। सीतापाईलामा बा ४९ प ३११२ नम्बरको रातो पल्सर मोटरसाइकलमा संकित व्यक्ति हुइँकिदै गएको देखेपछि प्रहरीले उसको पिछा गरेको थियो। भीमढुंगा पुगेपछि एक्कासी प्रहरीमाथि गोली चलाउन सुरू गरेपछि प्रहरीले जवाफी फायरिङ (क्रस फायर) गरको थियो। प्रहरीको गोली लागि ढलेपछि प्रहरीले व्यक्ति पहिचान गर्दा चरी रहेको खुलेपछि मात्रै यो सुचना केन्द्रसम्म पुगेको थियो।
घटनास्थलमा महाशाखा प्रमुख एसएसपी पुष्कर कार्की र हनुमानढोका प्रहरी प्रमुख एसएसपी उत्तम कार्की सहितको टोली पुगेको थियो। महाशाखा प्रमुख कार्कीका अनुसार चरी कपला मुडुलो पोर हुलिया परिवर्तन गरेर हिंडेका थिए। प्रहरीले घटना स्थलबाट मेड ईन युएसए लेखिएको पेस्तोल, त्यसमा लाग्ने एक राउण्ड गोली र पाँच राउण्ड गोलीका खोका बरामद गरेको छ। ‘ प्रहरीमाथि गोली प्रहार भएपछि मात्रै प्रहरीले गोली प्रहार गरेको हो, कार्कीले भने। प्रहरीले प्रहार गरेको गोली पेट र छातीमा लागेको छ।
एसएसपी कार्कीका अनुसार चरीले प्रहरीमाथि सात राउण्ड गोली फायर गरेका थिए भने प्रहरीले जवाफी फायरिङमा आठ राउण्ड गोली प्रहार गरेको थियो। प्रहरीले चरीको शव नजिकैबाट मेड ईन युएसए लेखिएको पेस्तोल र त्यसमा लाग्ने एक राउण्ड गोली र पाँच राउण्ड गोलीका खोका बरामद गरेको छ। उच्च स्रोतका अनुसार चरी केही दिनमै अदालतमा आत्मसमर्पण गर्ने योजनामा थिए। प्रहरीले चरीको शव पोष्टमार्टको लागि महाराजगंज स्थित त्रिभुवन शिक्षण अस्पतालमा राखेको छ। ‘ प्रहरीको क्रस फायरमा चरीमा मारिएका हुन्, थप अनुसन्धान गर्दै छौं,
तत्कालीन काठमाडौं सुरक्षा प्रमुख एसएसपी रमेश खरेलले काठमाडौंमा ‘ गुण्डा अप्रेशन’ चलाउँदा गणेश लामा, अभिषेक गिरी, दिपक मनांगे लगायतका गुण्डाहरू पक्राउ गर्दा चरी पक्राउ गर्न दबाब थियो। ठेक्कापट्टा, गुण्डागर्दी, व्यवसायीलाई धम्याएर चन्दा असुली लगायतका आपराधिक गतिविधिमा संलग्न चरी राजधानीको नयाँबजार एरियालाई आधारईलाका बनाएर अपराधकर्म गर्दै आएका थिए। चरी प्रहरीको निशानामा जति बेला थिए त्यतिवेला
महाशाखा प्रमुख एसएसपी कार्कीले पहिलो पटक महाशाखामा गरेको पत्रकार सम्मेलनमा भनेका थिए ‘ केही गुण्डा हतियार सहित हिड्छन् भन्ने जानकारी आएका छन्, मेरा अफिसर्स सँग पनि हतियार हुन्छन् नै, गुण्डागर्दी नियन्त्रणका लागि कानुनको दायरमा वसेर प्रहरीले हतियार चलाउन कन्जुस्याइँ गर्दैन।’
चरीमाथि यस अघि पनि प्रहारको प्रयास भएको थियो। धादिङमा प्रेस चौतारीको कार्यक्रममा सहभागी भएर काठमाडौं फर्कने क्रममा चरीमाथि गत वर्ष असार २१ गते सतुंगलमा गोली प्रहार भएको थियो। उनीमाथि गोली प्रहार गर्ने राधे भन्ने राधाकृष्ण भण्डारीलाई प्रहरले पक्राउ गरि कारबाही गरिसकेको छ। त्यसैको बदला लिन चरी समुहले भण्डारीमाथि नयाँ बजारमा खुकुरी प्रहार गरेको थियो।
साभार: अन्नपुर्ण पोस्ट दैनिक
ट्रम्पद्वारा उत्तर कोरियाको सुरक्षाको ग्यारेन्टी, किमले आणविक हतियार त्याग्ने
एजेन्सी । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र किम जोङ उनबीच मंगलबार सिंगापुरमा ऐतिहासिक शिखरवार्ता सम्पन्न […]
गायक सन्जिब पराजुलीको नयाँ गीत ‘आँखामा’ सार्वजनिक
अमृत शर्मा सिड्नी, अस्ट्रेलिया- नेपाली सांगीतिक क्षेत्रका मुर्धन्य वक्तित्वहरु संगीतकार सचिन सिंह, गीतकार […]
सिड्नीमा ममताको ‘ जीवनका तरङ्ग “लोकार्पण गरिंदै
असनेपालन्युज । सिड्नी । कवयित्री ममता तिवारिको प्रथम कृति "जीवनका तरंग " को सिड्नीमा लोकार्पण हुने […]
~मुक्त्तक ~तिम्रो मुल्य कति !?
~मुक्त्तक ~तिम्रो मुल्य कति !? कोहि यहाँं, बनेर आउंछन्, घाउ कोहि यहाँं , खोजेर आउंछन्, दाउ। […]